Izinto eziluncedo ngokusebenzisa ikhamera yesilumkiso soMzimba wamapolisa | Izisombululo ze-OMG
Izinto eziluncedo ngokusebenzisa ikhamera yesilumkiso soMzimba wamapolisa
Ikhamera ye-Warn Warn ikwabizwa ngokuba yi-BWV (iVidiyo yeWall Worn) isebenza njengevidiyo evakalayo, ividiyo erekhodiweyo, okanye inkqubo yokurekhoda iifoto eyenzelwe ngokukodwa amapolisa. Uhlobo olunjalo lweekhamera lunoluhlu olulinganiselweyo lokusebenzisa kunye noyilo, olusetyenziswa ngokukodwa njengenxalenye yezixhobo zamapolisa. Ngaphandle kokusetyenziswa kwamapolisa, ezi khamera zikwasetyenziswa kumashishini ahlukeneyo anjengezorhwebo, ezempilo, ezonyango, ekusebenziseni emkhosini, abantu abasebenzayo bangasebenzisa iikhamera ezinxibileyo, kunye nobuntatheli. Ingxelo yeNascent ibonisa ubungqina obuxubeneyo malunga nefuthe leekhamera ezinxibileyo ekusebenziseni amandla ngabahlali kunye nokunyanzeliswa komthetho ngamapolisa.
Ii-BWC zenzelwe ngokukodwa ukuba zixhotywe kwelinye lamalungu omzimba amathathu, anje nge torso, umnqwazi, okanye iiglasi. Ezinye iikhamera ziza nezinto zokusasaza bukhoma, ngelixa ezinye zijolise kugcino lwasekhaya olufana neeDigital Voice Recorder. Imibutho eliqela, kubandakanya iZiko loVavanyo kunye noPhando lweTekhnoloji yoLwaphulo-mthetho kuZwelonke (NJTR) baqhube uphando kwiikhamera zomzimba ukunceda imibutho ekuthengeni eyona ilungileyo. Nangona kunjalo, isifundo sichaza izixhobo zokwenza izinto, ukusebenza, i-GPS, iaudio, kunye namanye amacandelo.
Ezi khamera zisetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye amagama azo ngala:
Iikhamera zeWorn Worn zenzelwe ngokukodwa amapolisa kunye nokunye ukuthotyelwa komthetho ukugcina uxolo kulo lonke eli dolophu okanye kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, ezi khamera zenzelwe ukomeleza ukusebenzisana phakathi kwabahlali namapolisa. Ke ngoko, isizukulwana sokuqala samakhamera amatsha anxibe umzimba sikhululwe nge2005 e-UK. Nangona kunjalo, kulandelwa ukusuka kwi-2014 ukuya phambili kukuphunyezwa kwamanani amakhulu e-US ukwandisa ukuphendula nokucaca kwamapolisa ekuhleni. Emva koko, amanye amazwe amaninzi alandela emanyathelweni afanayo kwaye azibandakanye ekuziqhubeni. Izifundo zakuqala kakhulu zibonisa impembelelo elungileyo, kodwa iimpendulo zinophononongo oluxubeneyo. Iziphumo zibonakalisiwe ezinye iingxelo ezahlukileyo ngokuxhomekeke kwimeko yengingqi kunye nezikhokelo zeekhamera zomzimba. Imingeni emininzi ibandakanya:
Zombini iikhamera ezinxibe umzimba kunye nesigcina-ntloko zisetyenziswa kwimbutho yasemkhosini. Nangona kunjalo, iividiyo zingagcinwa ekuhlaleni okanye zisasazwe bukhoma zibuyele kwiziko lokuyalela okanye ngaphandle komkhosi.
Nazi ezinye izibonelelo zeKhamera yoMzimba-waBelebi ziikhamera ongathanda ukuzifunda
Ngokwamagosa asebupoliseni asebenzisa ezi khamera bathi zidala ukuziphendulela kunye nokungafihlisi ukunciphisa ubundlobongela obenziwa ngamapolisa. Ukongeza, baqaphele ukuba iikhamera zomzimba zibonelela ubungqina bokuba bafuna ukubonisa okanye bazichaze izityholo zokuziphatha gwenxa kwaye zisisixhobo esifanelekileyo soqeqesho lwamapolisa kunye nokubonelela ngokhuseleko kunye nenkxaso eluntwini. Ngokuchasene namandla amapolisa asebenzisa iikhamera zomzimba zithi iikhamera ezinxibileyo zichaphazela kakubi impilo yomzimba nengqondo yabasebenzisi ngokubabambisa ngohlobo olunjalo lwezixhobo kunye noxinzelelo lokurekhodwa kwevidiyo. Masize kule ndawo kwaye sixoxe malunga nezibonelelo zekhamera yamapolisa enxibe umzimba.
Ngokungathandabuzekiyo, abantu bangaphezulu kwehlabathi baziphatha ngendlela eyahlukileyo xa besazi ukuba bayenziwa iifilimu. Ke ngoko, iikhamera zombutho wamapolisa zinokukhuthaza isimilo sokuziphatha kwamagosa asebupoliseni phambi kwabantu kwaye lo mthetho uyasebenza esidlangalaleni, ukhokelela ekucutheni kwezinga lolwaphulo-mthetho, ukwenza ukusetyenziswa kweziganeko zonyanzeliso nokukhusela abantu abahlasela amagosa asebambisaneni. Ngokokufunda e-Rialto, umda wolwaphulo-mthetho u-50% wehla ngenxa yeekhamera ezambethe umzimba wamapolisa xa kwakuqhutywa iikhamera zomzimba zamapolisa. Ngokumangalisayo, izikhalazo ngokuchasene namagosa zawa ngokuzenzekelayo ukusuka kwi-28 ukuya kwi-3 ngonyaka wolingo.
Ukukhuselwa kwamaGosa aseMapoliseni kwizityholo zobuxoki kunye nokuziphatha gwenxa
Njengoko benditshilo ngentla apha, i-Won Camera yePolisa (ngokufutshane i-PBWC) inika ubungqina kunye nevidiyo enokungqinwa ukuba yintoni egwenxa ngexesha elinikiweyo. Uhlobo olunjalo lwetekhnoloji luluncedo kuwo omabini amaqela afana namaGosa amaPolisa kunye noluntu. Nawaphi na amapolisa anokujonga esisebenzisa le teknoloji aphathe kakubi kunye noluntu, lo gama wonke umntu ebanjwa esidlangalaleni esiya kuthi sibanjiwe azame ukwenza izityholo ezingekho mthethweni ngawo nawaphi na amapolisa. Siyibala njengenye yezona ndlela zilungileyo kuba ikhuselekile kuwo omabini amaqela. Amapolisa aliqela kula mazwe afumanekayo kuwo obu buchwephesha bohlwaywa amapolisa kunye noluntu ngenxa yokuziphatha gwenxa.
Esona sixhobo sibalaseleyo sokufunda kwaye sinenkxaso eqaqambileyo evela kuLuntu
Emva kwezivumelwano ezimbini, kukho isithathu apho ividiyo erekhodwe kwiikhamera zamapolisa ezii-Worn inokusetyenziselwa ukuqeqesha amapolisa akhoyo namatsha. Ke ngoko, iSebe lamapolisa aseMiami liqala ukusebenzisa le teknoloji kwaye libhengeza icandelo lezixhobo zamapolisa ukusukela nge2012. Ngenxa yokuba benxibe iikhamera, abantu baziva bekhuselekile, kwaye isimilo samapolisa sitshintshile siye eluntwini. Ngoku, bathetha ngembeko nangembeko. Kule mihla, uluhlu olubanzi lweeKhamera zeSilumkiso soMzimba ziyafumaneka, kubandakanya:
I-Mini ye-WIFI ye-GPS / 3G / 4G Yomzimba wekhamera eyamkelweyo
Ikhamera ye-3G / 4G engenantambo yomzimba (BWC004-4G)
Ikhamera encinane yeCandelo elinesibini kunye neMemori yangaphandle (BWC055)
Ikhamera ye-Worn Camera yomzimba wamapolisa (BWC004)
Ukurekhoda ikhamera ye-Worn-Worn
Ikhadi le-SD elixhaswe liKhamera yomzimba weWorn
Ikhamera ekhuselekileyo yomzimba oMncinci nge-Encryption + LCD
Zonke ezi ziikhamera zomzimba ezithandekayo zisetyenziselwa ukhuseleko olungaqhelekanga, kwaye ukuba ufuna ikhamera enjalo ungandwendwela omsolutions.com. Unokufumana nayiphi na imveliso yazo ngexabiso elifanelekileyo. Nangona isetyenziswa ngumbutho, abemi banikwa imvume yokuba nokhuseleko. Njengoko benditshilo ngentla apha, azikho iingxelo ezimbi ngokwezi khamera zomzimba zinxibileyo, kodwa ngandlela ithile ziyakuchaphazela impilo yakho yomzimba okanye yengqondo. Ehlabathini, yonke into inezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga, kwaye ukuba silandela umgaqo ke kuyaqinisekiswa ukuba iikhamera zoMzimba oMi zaBantu banezibonelelo nazo. Nalu uluhlu olukhawulezayo lokungalunganga (i-cons) ukuze uqaphele.
Ezi khamera azithembeki kwaye zibiza kakhulu
Ngenelela kubucala boLuntu, ukubhengeza amaxhoba, ubudlelwane boMonakaliso boLuntu kunye namapolisa
Sebenzisa iikhamera, ukhuseleko lwamapolisa lusemngciphekweni ngalo lonke ixesha.
Izinto eziluncedo ngokusebenzisa ikhamera yesilumkiso soMzimba wamapolisa gqibela ukuguqulwa: NgoSeptemba 26th, 2019 by admin
2372 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje
Izibonelelo zeKhamera ye-Worn-Worn Camera ezibhedlela